SHAQO LA’AANTA UGU BADDANI WAXAY HAYSATAA HAWEENKA! W/Q: FARHAN MOHAMED SULTAN NUR (RAKAD) |
SHAQO LA’AANTA UGU BADDANI WAXAY HAYSATAA HAWEENKA! W/Q: FARHAN MOHAMED SULTAN NUR (RAKAD)
Waddankeena somaliland waa waddan shaqo la,aantu gaadhay heerkii ugu sareeyay taas oo shaqo la,aantu kor u dhaaftay 75% marka la sii qiimeeyo ee loo kala saaro rag iyo dumar siday u kala haystaan ayaa waxa shaqooyinka u baddan hela raga celcelis ahaan 80% taas oo sababtay in haweenku ay bilaa camal ahaadaan , oo aanay meelaha qaarkood kaba shaqaynba.
Shaqo helista haweenku waa kor u kaca dhaqaalaha waddanka maxaa yeelay haweenka aqoonta leh ee jaamacaddaha ka baxay , marka ay shaqo helaan dakhligooda waxay ku celiyaan gurigii ay ka imaadeen Sidoo kale waxay sameeyaan dhismayaal ama dhigaal , iyagoo inta baddan dhaqaalahoodu u baddan yahay horumarinta guriga iyo wax qabad muuqda.
Shaqo la,aanta u baddan waxa sababay xirfadaha qaar kood oo ragga oo kaliyi ay qabtaan , halka dumarku aanay wali haweysan, sida darawalkii waa rag, dhismayaashii oo dhan rag baa ka shaqeeya, leydhkii oo dhan rag baa ka shaqeeya, Iibkii , dilaalkii iyo adeegyadda kala duwan oo dhanba rag baa ka shaqeeya, Dumarkii waxay nasiib u yeesheen shaqo xafiis ,ganacsi ,tukaan ama adeegyo kale.
waa shaqadii xafiiskee waa ay adkaatay in dhamaan haweenku ay xafiis wadda fadhiistaan suuro gal maaha, waa ta labaade haddii ay ganacsi ama tukaan samaysan lahaayeena waxaanay haysan dhaqaale ay ku maal galiyaan, adeegyadda kale ee ay helaana waa kuwo sii yaraanaya inay si saxa u helaan.
Haweenku inay shaqo helaan waxa ku dhismaya waddanka iyo bulshada maxaa yeelay haddii gabadhi shaqo haysato waxay wax siisaa dhamaan xaafadooda oo dhan waxaanay ka shaqaysaa horumark reerka, dhaqaalaha iyo daryeelka waalidka inkastoo raguna kula mid yahay haddana waa lagu kala darajo sareeyaa.
Shaqooyin baddan oo dumar qaban lahaayeen waxa qabta raga , meelo baddan oo rag ka shaqeeyana waxa ku wanaagsan dumarka , waayo goobaha ganacsiyadda iyo soo dhawaynta, xisaabaadka, iibka iyo daryeelkaba waxa ku wanaagsan haweenka, waxaad arkaysaa shirkad dhan oo aanay gabadhba ka shaqayn, waliba goboladda burco, Berbera, laascaanood.
Imika Hargeisa waad ku arkaysaa goobo dumarka ka shaqeeyaan oo loogu talo galay, waana ay ku yaryihiin se wali lama gaadhin halkii laga rabay.
Waxaan ku soo gabagabaynayaa haweenku waa nuurka guri kasta, waana wadnaha guri kasta si ay u gaadheen heer , si ay u shaqaystaan oo cilmigooda uga faa,ideeyaan bulshadda waxaa waajib ah in la horumariyo oo laga shaqaalaysiiyo goobaha muhiimka ah ee shaqo looga heli karo.
Waxaan ugu baaqayaa dawlada , haayadaha, ganacsiyada iyo goobkasta oo shaqo laga helo in haweenka masuuliyad xooga la iska saaro oo haddii ay shaqo soo codsadaan si cadaalada loogu yeedho, maxaa yeelay inanta shaqo doonka ahi ama haweenka shaqo, doonka ahi waa ay adag tahay, in aanay sida raga soo noqnoqon oo aanay ina waydiin shaqadii ma soo baxday iyo ma soo baxaysaa toona, haweenku awooda kaliya ee aan ku arkay waa codso oo kaliya kamana daba tagaan in CVgoodii gaadhay halkii taasna waa ta sababtay in haweeb baddan ay bilaa camal noqdaan.
Haweenku waa ay ka qajilaan su,aalaha raga haysta shirkadaha, haayadaha iyo goobaha shaqooyinka laga helo, sidaa awgeed waxa markasta muhiim ah in shaqooyinka ay soo codsadaan haweenku si cadaaladana laga yeelo oo la imtixaano sidoo kalana laga qaado waraysi calafkoodana la siiyo.
Haddii xitaa aan shaqo loo hayn, waxa la siin karaa waayo aragnimo iyo Intership fursad iyo tababar ay ku shaqo tagaanba.
Haweenku waxay in baddan ku soo jireen waxbarasho, iyo halgan dheer oo waxbarasho sidaa darteed maalinta ay xafiiskaaga ama haayada aad masuulka ka tahay, ama ganacsigaaga kaaga soo codsadaan shaqo haddii ay banaan tahay si cadaaladda ka yeel .
Haweenkana waxaan leeyahay, Samirka badsadda oo dadaalka badiya, oo ha ka niyo jabina , haddii aad shaqo rabtaan, subaxkasta raadsada oo xafiiskasta geysta Codsiyo shaqo , hakana caajisina ilaa iyo intaad helaysaan shaqadii aad rabteen, Adduunka qofba qofkuu ka samir, dadaal iyo dhaq-dhaqaaq baddan yahay ayuu ka shaqo helis dhaw yahay, markaa markasta dadaala oo u samra carqabaddaha idinka hor iman doona.
Sidoo kale waxaan ku baaqayaa in la sameeyo mashruuc haweenka oo kaliya shaqo loogu abuurayo ama khibrad shaqo lagu siinayo.
Haweenku waxay u baahan yihiin Hagis , cid hagta oo tusta halka shaqadda laga helayo iyo qaabka loo marayo, cida hagi kartaana waa isla haweenka oo gacmaha is qabsada samaystana ururo ay ku bahoobeen oo ay shaqo la,aanta kaga bixi karaan si ay u gaadhaan heer shaqo la,aaneed.